Barnaamijka 'Vibrant & Equitable Communities' ee McKnight wuxuu kobciyaa awooda la wadaago, barwaaqada, iyo kaqeybgalka iyadoo loo marayo afar istiraatiijiyad: Dardargelinta Dhaqdhaqaaqa Dhaqaalaha, Dhisida Hantida Beesha, Samee Nidaam Guriyeyn Caddaalad iyo Caddaalad ah, iyo Xoojinta Kaqeybgalka Dimuqraadiga. Istaraatiijiyaddan gudaheeda, waxaan dooneynaa inaan ku gaarno horumarin nidaamsan oo ku timaadda natiijooyinka shaqsiyeed, bulsho, iyo bulsheed. Waxaan fiirineynaa xariifnimada dadka ka wada shaqeynaya guud ahaan Minnesota si ay u xalliyaan farsamooyinka daboolaya baahiyaha bulshada lagu qeexay, wax ka qabashada xaaladaha maxalliga ah, iyo u beddelashada siyaasadaha, dhaqamada, iyo hay'adaha siyaabo waara.
Waxaan higsaneynaa inaan hubinno in shaqsiyaadka ay gaari karaan oo ay joogteyn karaan dakhli iyo hanti kordhay, dhisida xirfado waara oo abuura dariiqyo shaqo tayo leh, iyo inay naftooda u dejiyaan sidii ay ugu guuleysan lahaayeen dhaqaalo si dhaqso leh isu beddelaya.
Mudnaanta: Sinnaanta Dhaqaalaha iyo Kordhinta
Taageer helitaanka mushahar iyo faa'iidooyin cadaalad ah oo cadaalad ah, shaqo tayo leh, iyo sharaf iyo badbaado goobta shaqada.
Yaree caqabadaha maaliyadeed ee nidaamsan ee carqaladeeya dhaq dhaqaaqa dhaqaalaha, sida siyaasadaha, ganaaxyada, khidmadaha, iyo farsamooyinka kale ee xoojinta hantida.
Mudnaanta: Lahaanshaha Hore
Maalgeli moodello la caddeeyey oo soo ifbaxaya si loo ballaariyo milkiilayaasha guryaha.
In kor loo qaado helitaanka raasumaalka, tababarka, iyo kaalmada farsamo ee ka caawisa hal abuurka ganacsiga iyo kobcinta iyo ganacsiga yaryar.
Mudnaanta: Abuur Wadooyin loo maro Shaqada Tayada
Kordhi hanashada ka dib dugsiga sare iyo aqoonsiga.
Ku xir shaqaalaha si ay u ilaaliyaan qoysaska, tayo sare leh, iyo shaqooyin adkeysi leh.
Ka hawlgal shaqaalaha iyo loo shaqeeyeyaasha sidii ay ula qabsan lahaayeen tikniyoolajiyada cusub, moodooyinka ganacsiga, iyo baahiyaha loo dejiyo xirfadaha.
Ku laabo Xeeladaheena
Waxaan higsaneynaa inaan yareyno farqiga hantida ee Minnesota iyadoo loo marayo kororka kantaroolka maxalliga ah iyo qaababka lahaanshaha dimuqraadiyadda.
Mudnaanta: Kordhinta Helitaanka Caasimadda
Sii hormarinta habab maaliyadeed oo cusub iyo qalab loogu talagalay maalgashiga bulshada ay wado.
Dhiirrigelinta dhaqaalaha waddanka ku soo kordhay iyada oo loo marayo xakamaynta maxalliga ah ee dhulka, ganacsiyada, iyo ilaha si looga faa'iideysto hantida bulshada, dhaqanka, iyo maaliyadeed ee la wadaago.
Mudnaanta: Taageerada Moodellada Lahaanshaha Wadajirka ah
Maalgeli horumarinta moodooyinka lahaanshaha cusub iyo kuwa aan caadiga ahayn, sida iskaashatooyinka iyo aaminaadaha dhulka.
Waxaan higsaneynaa inaan balaarino fursadaha guryeynta ee loo simanyahay dhamaan jaaliyadaha Minnesota si qof walba ugu noolaado guri amaan ah, tayo leh, oo qiimo jaban leh.
Mudnaanta: Ballaarinta Helitaanka Guriyeynta iyo Degganaanta
Kordhinta kireystaha iyo codka milkiilaha guriga, awooda, iyo awooda si looga hortago qax, takoor, iyo dhiig-miirashada.
Taageer dadaallada si loo hubiyo in fursadaha guryeynta ee hadda jira ay si caddaalad ah oo fudud looga heli karo dhammaan bulshada.
Mudnaanta: Dhiirrigelinta wax soo saarka iyo ilaalinta guryaha la awoodi karo
Kordhinta maalgashiga dadweynaha iyo kuwa gaarka loo leeyahay ee ku saleysan wax soo saarka guryaha la dhowro iyo ilaalinta.
In la xoojiyo kaabayaasha ururada iyo shirkadaha soo jiita, ka faa’iideysta, una hawlgaliya raasamaal si loo dhiso loona dayactiro guryo la awoodi karo.
Waxaan saadaalineynaa Minnesota oo dhamaan dadka degan ay cod ku leeyihiin go'aaminta mustaqbalkeena la wadaago. Waxaan hiigsaneynaa inaan kordhino kaabayaasha dhaqaalaha ee gobolka oo dhan iyo awooda lagu dhisayo awooda, ku mashquulinta dadyowga kaladuwan hormarinta barwaaqada aan wadaagno, iyo in la abuuro barxado si ballaaran looga qeybqaato dhaqdhaqaaqa si loo ogaado bulshooyinka firfircoon, sinaanta.
Ahmiyada: Hogaaminta barbaarinta
Maalgalin ku samee hogaaminta dadka madow ee reer Minnesota, beelaha asaliga ah, iyo reer Minnesota ee midabka leh. Mudnaanadan dhexdeeda ah waxaan ku darnaa fiiro gaar ah hoggaamiyeyaasha Greater Minnesota iyo dhalinyarada. Waxaan sidoo kale ku darnaa abuurista isku xirnaanta isirka iyo awooda dhisida ee laxiriira kaladuwanaanta, sinaanta, iyo ka mid noqoshada.
Kordhi kala duwanaanshaha ballaaran ee hoggaaminta waaxda dawladda iyadoo loo marayo ballanqaadyo cad oo lagu hormarinayo mustaqbal loo siman yahay oo loo wada dhan yahay oo loogu talagalay dhammaan dadka reer Minnesota.
Mudnaanta: Dhisida Awoodda
In la xoojiyo shabakadaha gobolka ee ku saleysan arrimo badan oo ku saabsan jinsiyadda, dhaqanka, da'da, iyo juqraafiga si loo dhiso ballanqaad la wadaago oo lagu gaaro sinnaanta.
Maalgeli aasaaska aasaasiga ah ee abaabulka si aad u taageerto awoodda bulshada si ay ugu hormariso sinnaanta arrimo badan markii loo baahdo.
Dhiirrigelinta dhaqannada bogsashada ee ka jawaabaya dhibaatada socota ee midabtakoorka isla markaana loo abuuro nidaam caafimaad oo bey'adeed oo loogu talagalay awood-dhisid.
Ahmiyada: Bedel sheekooyinka
Diiwaangeli, wadaag, oo dhiirrigeli fahamka qotada dheer ee sheekooyinka bulshadeenna kala duwan, gaar ahaan kuwa ka maqnaa, ama si qaldan looga been sheegay ama loo qiimeeyay, sheekooyinka guud.
Aragtida hore ee barwaaqada la wadaago si loo dhiso buundooyin ku kala duwan kala duwanaanshaha jinsiyada, dhaqanka, ama juqraafiga.
Dhiirrigelinta sheekooyinka iyo warbaahinta macnaha guud ka dhigaysa sababaha aasaaska u ah sinnaan la'aanta maanta iyo ka hor-tagga fikradaha xun iyo fikradaha qaldan.
Inta naga go'an ee ah xoojinta kaqeybgalka dimuqraadiyadda, McKnight wuxuu hayaa qeyb xadidan oo ka mid ah lacagaha deeqda sanadlaha ah si loogu geeyo waqtiyo xaddidan, fursado deg deg ah si loo horumariyo dimuqraadiyadda loona kordhiyo ka qeybgalka bulshada iyo kaqeybgalka.
La jaan qaadaya McKnight's Qaab-dhismeedka Istaraatiijiga ah iyo u heellan Kala duwanaanta, Sinnaanta, iyo Ka Qaybqaadashada, waxaan ku xirnaa barnaamijkeena firfircoon & sinnaanta mabaadi'da soo socota:
Nidaamyada Isbedelka: Waxaan qaadanaa hanuuninta-isbeddelka hanuuninta oo ay kujiraan labadaba qaabab bedelida nidaamyada jira iyo abuurista qaabab kale markii loo baahdo, badanaa anagoo taageerna abaabulka aasaasiga, dhisida awooda, isgaarsiinta istiraatiijiga ah, iyo dib u habeynta siyaasada guud.
Sinaanta & Dhaqanka: Waxaan maal galineynaa ururada iyo dadaalada ay hogaaminayaan dadka madow ee reer minnesota, jaaliyadaha asaliga ah, iyo reer minnesota midabkeedu waa qeyb ka mid ah faylalka tacliinta kaladuwan ee hormarinta sinaanta jinsiyada iyo dhaqanka ee Minnesota.
Wadooyinka Gobolka oo dhan: Waxaan lashaqeynaa wada-hawlgalayaasha metro iyo Greater Minnesota labadaba si loo gaaro awood wadaag, barwaaqo, iyo kaqeybgal gobolka oo dhan. In kasta oo McKnight uusan awood u yeelan doonin inuu maalgeliyo dadaallada beel kasta ama qayb ka mid ah gobolka, barnaamijka V&EC gudaheeda waxaan higsaneynaa inaan sii xoojino joogitaankeenna iyo ballanqaadkeena ku aaddan Weyn ee Minnesota.
Wadashaqeynta Qeybaha: Waxaan taageersanahay iskaashiga iyo dhismaha isbahaysiga guud ahaan qaybaha bulshada, kuwa gaarka loo leeyahay, iyo kuwa bulshada.
Shaqada isku dhafan: Waxaan raadineynaa xiriiro hal abuur leh oo hal abuur leh dhamaan howlaha kala duwan ee McKnight, oo ay kujiraan barnaamijyo kale iyo saameynta maalgashiga, si aan uhormarino himiladeena.
Berri Minnesota: Sinnaanta ayaa ah Habka Kobaca Sare